स्वास्थ्य/जीवनशैली Archives | Page 161 of 193 | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्वास्थ्य सेवा सुधार हुँदै…
काठमाडौं । हेल्थपोष्ट भवन र यसलाई सञ्चालन गर्न चाहिने उपकरण एवम् औजार र स्वास्थ्यकर्मीको उच्च सेवाभाव भएमा ग्रामीण क्षेत्रमा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न सकिदो रहेछ भन्ने उदाहरण सिन्धुपाल्चोकक... Read more
दाँतमा किरा लाग्ला, यी कुराहरुमा ध्यान दिनुहोस्
एक तत्थ्यांकका अनुसार नेपालका झण्डै ८० प्रतिशत मानिसहरु दाँतको समस्याबाट ग्रसित छन् । नेपालमा मात्रै होइन विदशीहरुलाई पनि दाँतको समस्याले सताउने गर्छ । दाँत तीन तहले बनेको हुन्छ । पहिलो तह द... Read more
यी ९ लक्षण देखिएमा तपाई शरीरमा पानीको मात्रा कमी भएको छ
औषतमा हामीलाई दैनिक ३ लिटर पानीको आवश्यकता पर्छ । अझै पसिना बग्ने गरिकाम गरियो, साह्रै गर्मी भयोभने त्यो भन्दा धेरै पानी शरीरलाई चाहिन्छ । शरीरमा पानीको मात्रा कमी भएमा धेरै समस्याहरु देखापर... Read more
छोरी काखमा च्यापेर ट्राफिकको जागिर
२६ वर्षीया लक्ष्मी गोलेलाई हरेक बिहान एउटा परिचित आवाजले बिउँझाउँछ । तत्काल जुरुक्क उठ्छिन् र नजर तन्काउँछिन् । आफूलाई हेर्दै छोरी मुसुक्क हाँसेपछि लक्ष्मीको मनमा कान्ति छाउँछ । त्यसैले त उन... Read more
शिरोधारा के हो? यस्ता छन् विधि र १० फाइदा
मानिसका तीनवटा आँखा हुन्छ्न् भनिन्छ। दुईवटाले दृश्य देख्ने काम गर्छन् भने बाँकी एउटा आँखा नदेखिने गरी निधारको बीच भागमा हुन्छ। जसलाई अङ्ग्रेजीमा ‘थर्ड आइ’ भनिन्छ भने नेपालीमा ‘अग्नचक्र’। त्य... Read more
मृत्युपछि शरीरमा के हुन्छ? यस्तो छ वैज्ञानिक र अाध्यात्मिक मत
फिल्ममा हामी देख्ने गर्छौं– कसैको मृत्यु भयो भने वरिपरि रहेका मानिसले उसको आँखा सुरुमै बन्द गरिदिन्छन्। आँखा खुला पारेर कसैको प्राण गएको छ भने हामी पनि सुरुमा शवको आँखा बन्द गरिदिनेगर्छौ। यस... Read more
श्रीमतीलाई दैनिक एक कोसा केरा खुवाउनुका १० फाइदाहरु
बिगुल स्वस्थ , हामीले धेरै जसो खाने प्रमुख फलफुलमा केरा पनि पर्दछ । केरा पोटासियमको राम्रो स्रोत हो , यसले रक्तसंचार राम्रो बनाउँछ । केराले महिलाको स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा गर्दछ । दैनिक एउटा... Read more
महिनावारी सम्बन्धी यी ५ तथ्य, जुन तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ
ऐजेन्सी– के तपाईंलाई महिनावारी सम्बन्धी सबै तथ्यको जानकारी छ? औसतमा एउटी महिला आफ्नो जीवनभर चार सय ५० पल्ट महिनावारी हुन्छिन्। यति धेरै पटकको महिनावारीमा महिलाले त्यसबारे पर्याप्त जानकारी पा... Read more
हप्तामा यति पल्ट यौन सम्पर्क राख्दा उत्तम हुन्छ ! जान्नुहोस
मानव जीवनमा अपरिहार्य बस्तु हो सेक्स | समय समयमा सार्वजनिक हुने सेक्सबारे गरिएका अध्ययनमा सेक्स पुनरावृत्तिबारे पनि विभिन्न धारणा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । तपाई कत्तिको सेक्स गर्न मन पराउनु... Read more